Tapatapak’ahitra : Mahabe ahiahy ny fikarakarana fifidianana -
AccueilSongandinaTapatapak’ahitra : Mahabe ahiahy ny fikarakarana fifidianana
Tapatapak’ahitra : Mahabe ahiahy ny fikarakarana fifidianana
31/10/2018 admintriatra Songandina 0
Kandidà miisa telo no vahinin’ny fandaharana Tapatapak’ahitra andiany fahadimy, vokarin’ny haino aman-jery On Air TV. Tabera Randriamanantsoa, kandidà laharana faha- 5 anatin’ny bileta tokana, Radavidson Andriamparany laharana faha- 9, ary Andriantseheno Marcelin laharana faha-7 no vahiny tamin’ny fandaharana omaly. Ireo kandidà voatanisa nandray anjara tamin’ny fandaharana ireo, dia samy nametraka ny ahiahin’izy ireo manodidina ny fifidianana. Samy anatin’ny firasain’ny kandidà, ireo vahiny nasain’ny fandaharana ireo. Laharam-pahamehana sy ivon’ ny adihevitra, ny tokony hanatsarana ny lisi-pifidianana. Tsy misy velively hoy Tabera Randriamanantsoa ny fikasana hanemotra fifidianana anatin’ny fangatahan’izy ireo, saingy kosa ny fangatahan’ny kandidà tsirairay dia miompana amin’ny fanatsarana ny fifidianana. Mahatsapa tsara anefa ireo kandidà, fa tsy ho vita vetivety ny fanatsarana io lisi-pifidianana io, antony tsy hisian’ny fihemorana. Nandritra ny adihevitra, dia nanamafy hatrany ny maha ara-dalàna ny fifanarahana notontosaina teny amin’ ny CCI Ivato ny kandidà Radavidson Andriamparany. Manoloana ny tsy fahitana ireo kandidà sasany nanatrika ny fivorian’izy ireo tany Ivato io, dia nambaran’ny kandidà laharana faha-9 ity, fa tokony hanaja ny sonia nataony ireo kandidà.
Nahitsy tanteraka ny kandidà laharana laharana faha-7, Andriantseheno Marcelin, nandritra ny fandaharana. Nambarany tamin’ izany fa ny fanarahana ny lalàna an-jambany dia manitsakitsaka tanteraka ny zon’ny Malagasy maro tokony hifidy. Amin’ ny maha mpitondra tenin’ireo firaisan’ny kandidà an’i Tabera Randriamanantsoa, dia nilaza ity farany fa miombon-kevitra tanteraka ny amin’ny tokony hampiatoana ny fifidianana. Maro loatra hoy izy ireo tsy fahatomombanana ka mampiahiahy tanteraka ny kandidà mirotsaka ny mety ho vokatra azo amin’ izany tsy fahatomombanana izany. Ny tokony hifantohan’ireo mpikarakara fifidianana hoy Tabera Randriamanantsoa, dia ny fanatsarana ny lesoka hialana amin’ny mety ho tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana. Izany hevitra izany raha teo dia niraisan’ireo kandidà nandritra ny fandaharana, ary namerenan’izy ireo nilaza ny tokony hisian’ny fanarenana izay lesoka izay. Hevitra avy amin’ ireo kandidà nandray anjara tamin’ ny fifidianana ihany anefa izany, ary izay no maha adihevitra ny adihevitra.
Mitohy ny asa ataon’ny fitondrana amin’ny fampandrosoana. Anisan’izany ny fanarenana vokatry ny rivodoza AVA, ka anisan’ireo natao haingana ny fanarenana ireo lalam-pirenena (faha-2, 34 ary 25) ny fanoloana ireo tetezana tapaka toa ny tany Vohiposa ...Tohiny